गर्नै नहुने काम गरेपछि श्रीमतिको हेर्न खोजेपछि साउदिमा एक नेपालि युवालाइ फाँ,सी दिइदै….
काठमाडौ । भरखरै साउदिबाट एक नेपालिको सारै दु:खद खबर आएको छ । साउदी गएको केही समय न,बित्दै उनलाइ फाँ’सिको स’जय हुने भएको छ। नवलपुर घर भएका टो,ल बहादुर घ,र्तिलाइ साउदिमा फाँ’सिको स’जय हुने भएपछी आफुलाइ बचाउन भनी नेपाली संचारकर्मी सँग गुहार मागेका छन।
उनले आफ्नो श्री’मती सँग भिडियो कलमा श्री’मतिको गो’प्य अं’ग हेर्न मागेका थिए। श्रीम तिले गोप्य अं’ग देखाएको सिसि क्यामेरामा कै’द भएको कुरा साउदिले थाहा पाएपछी उनलाइ फाँ’सिको स’जय हुने
सुनाएको बताउछन टोल बहादुर घर्ती। आफ्नो श्रीमती सँग मजाक गर्नले आज आफुलाइ बिना गल्ती फाँ’सी हुन लागेपछी बचाउन हार गुहार गर्दै छन टोल बहादुर। तलको भिडियो पूरा हेर्नुहोस् !
यो पनि,,श्रीमतीले बिदेश गएको दुई बर्षमा नै श्रीमानलाई चिन्दिन भनेपछी दुई छोरिहरुको बि’चल्ली(भिडियो हेर्नुस ) वैदेशिक रोजगारि नेपालिहरुको लागि रहरभन्दा बढि बा’ध्यता हो । देशमा रोजगारिको अवसर नहुदा नेपालका युबायुबतिहरु बर्सेनि हजारौको संख्यामा बिदेशिइरहेका छ्न र उनिहरुको गन्त व्य भने खा’डी मुलुकहरु बन्दै गएका छ्न ।
घरपरिवारको अबस्थामा केही सुधार आउने हिसाबले दुइचार पैसा कमाउन भनी गएका नेपालीहरुको स”मस्याको बिषय किन बन्दैछ पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी ? श्रीमान बिदेश जादा श्रीमती अर्कै भा”ग्ने त कहि ले श्रीमती घरमै छ्दा श्रीमान अर्कै महिलासग लागेर गा”यब हुने कुराहरु त सामान्य विषय नै बन्दै गएका छ्न पछिल्लो समय त ।
आजको घटनापनि यहि विषयमा मेल खाने प्रकृतिको रहेको छ ।इलामको नयाबजारमा घर भएर बसोबास गर्दै आएका सन्जिब रसाइली नाम गरेका एक पुरुष दुई बर्ष अगाडि दुबई गएकी आफ्नी श्रीमती बिगत एक बर्षदेखि सम्प र्कबिहिन रहेको भन्दै सहयोगको अपेक्षासाथ साथमा दुई नाबालिक छोरी च्यापेर मिडियामा आएका छन ।
दुइबर्ष अगाडि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुब ई गएकी आफ्नी श्रीमती १ बर्षदेखि सम्पर्कबि हिन रहेको बताउदै उनी श्रीमतीको खोजिमा मिडियासामु आएका छन । श्रीमतीलाई फोन गर्दासमेत उनले आफ्नो कोठा को दिदी रिसाउने र सुपरभाइजरसमेत रिसाउने बताउदै फोन नगर्न अनुरोध गरेको उनि बताउ छ्न ।
फोन गर्दा पनि अनेक ब”हाना बनाएर बोल्न नखोजेको र आफै फोन गर्छु भनेर आश्ववासन दिएर फोन पनि नगरेको उनी बताउ छन । नानिहरुसग समेत फोनमा नबोल्ने गरेको उनी बताउछ्न । नानिहरुले एक शब्द बोल्न नपाउदै फोन का”ट्ने गरेको उनी बताउछ्न ।नानिहरु घरपरिवार सबै बि”र्सेको देख्दा त अर्कै पुरुषसग आफ्नी श्रीमती को ल”स”प”स हुनसक्ने उनी बता उछ्न । श्रीम तीले बिदेशमा गएर प”र”पुरुषहरुसग खि”चिए को फोटो सामाजिक संजालमा हालेको उनी बताउछ्न ।
आफन्तहरुले भने नेपालमा हुदा त नाक कटाइ कटाइ बिदेशमा गएर पनि छोडिन भन्दै गा”ली गर्ने गरेको बताउछ्न उनी । अहि ले त सन्जिब को हो त्यो समेत चिन्दिन भन्ने गरेको बताउछ्न उनी । क”ठै उनले आफ्ना आखामा आँ”सु थाम्न सकेनन ।
२०७८ माघ १४, शुक्रबार प्रकाशित0Minutes 305 Views